Mpandeha orinasa kely | Bob Prosen
Alatsinainy Janoary 24, 2011 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Taona vitsivitsy lasa izay dia namaky aho ary nankafy tsara Teory oroka veloma, boky iray avy amin'i Bob Prosen izay manome torohevitra tsara ho an'ny orinasa. Ny fandaharan'asa fanofanana momba ny fitarihana sy fitantanana orinasa an'i Bob dia nampitombo ny fahombiazany sy ny tombom-barotra ary nanova ny kolontsaina ao Saber, Hitachi, Sprint, AT&T ary orinasa kely an-jatony manerana ny firenena.
Ilaina be izao ny consultation sy ny fampiofanana an'i Bob - ity misy ampahany vao tsy ela akory izay avy amin'ny MSNBC:
Ny tsirairay dia manontany hatrany ny fomba hampitomboana haingana ny fahombiazana sy ny tombom-barotra amin'ny orinasany. Toa te hahalala ny paikady marina tokony harahina ny rehetra mba hampitomboana ny varotrao, hampihenana ny tahan'ny mpiasa ary hampisondrotra ny tombom-barotra na inona na inona toe-karena. Naparitako ny ankamaroan'ny torohevitra nomen'i Bob hatramin'ny nanombohany ny orinasako ary miroborobo ny orinasa.
Nifandray foana izahay sy i Bob ary nifanome tanana izy mba hampiroborobo an'ity andiam-panofanana manokana ity (Matetika dia mitentina $ 10,000 ho an'ity karazan-javatra ity izy, saingy mila valiny momba ilay programa izy.)
ao amin'io webinar maimaim-poana Hampianatra anao manokana i Bob:
Mametraka ny tanjona "marina" amin'ireo ampahany telo manan-danja indrindra amin'ny orinasanao.
Ireo metrikan'ny asa lehibe indrindra izay ahafahanao mahatratra ny tanjonao.
Ahoana ny fomba hanombanana ny fahombiazan'ny fahaiza-mitarika anao manokana. Manana zavatra ilaina ve ianao mba hitarihana ny fikambanananao hahazoana tombony miavaka?
Avereno jerena fotsiny ilay tranokala jereo ny fiofanana momba ny horonan-tsary. Aorian'ny fijerena ny fiofanana dia alao antoka fa tonga ao amin'ny lisitr'i Bob laharam-pahamehana ianao mba hampandrenesina rehefa misy ity programa fandrosoana ity. Izay no izy, manantena fa mankafy ny fiofanana!
PS: Etsy ambanin'ilay horonan-tsary dia azonao atao ny misintona bonus tena manokana sy manome hevitra momba ilay fiofanana.
Tags: fanaraha-maso ny fanentananakaroka saryBoky fivarotanafampiharana antsinjarany finday